Facebook က CEO ဖြစ်သူ Mark Zuckerberg က "Jarvis" ဆော့ဝဲဘတ္ဆောက်
22 ဒီဇင်ဘာ 2016
Jarvis အမည်ရှိ - - Mark Zuckerberg ဟာရဲ့ကြောင့်ဖြစ်စေ brainpower ပြည့်နှက် programming ကို "Butler" အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လက်ရှိဖြစ်တယ်, ပင်သူ၏မိသားစုနှင့်အတူကစားသည် Facebook မှသူဌေးတနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်။
Zuckerberg ဟာသူ့ရဲ့မိသားစုယူနစ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်တစ်ဦးကို virtual လက်ထောက်အဖြစ် "Iron Man" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင် Jarvis အားဖြင့် enlivened မူဘောင်အောင်မှ 100 နာရီဝန်းကျင်ကျူးလွန်ယခုနှစ်တစ်ဦးချင်းစီအကျိုးတူဆန့်ကျင်တက်သွားလေ၏။
"အချို့သောနည်းလမ်းတွေထဲမှာ, ဒီစမ်းသပ်မှုငါမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ရိုးရှင်းတဲ့ခဲ့," Zuckerberg ဟာအဓိကလူ့အဖှဲ့အစညျးမှာမိမိစာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ် post ကိုကပြောသည်။
"အမှန်စင်စစ်, ငါ၏ပြေးစမ်းသပ်မှု (ကျနော်ဒါ့အပြင် 365 အတွက် 2016 မိုင်ပြေးထွက် set) ကိုပိုမိုစုစုပေါင်းအချိန်ကိုယူ။ "
Jarvis ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ရုပ်သည်မဟုတ်, အစား application တစ်ခု Zuckerberg ဟာအလင်းအိမ်, အပူချိန်, ဂီတ, လုံခြုံရေး, apparatuses နှင့်ပဲအစအဦးရဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့အားမိမိတယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ် PC မှတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါထုတ်ကုန်ကသူ့အရသာနဲ့ဥပမာထဲမှာကြာနှင့်လည်းအသစ်သောစကားများသို့မဟုတ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ပင် Zuckerberg ဟာနှုန်းကဲ့သို့မိမိတဦးတည်းနှစ်အရွယ်ကလေးမလေးမက်စ်, ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။
ဘုံစကားပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုစွမ်းရည်ပြောဆိုသောသို့မဟုတ် Message လှမ်းပို့ဆင့်နားနဲ့သူတို့ကိုထုတ်ပေးသူရိပ်မိဖို့ကအားပေး, Jarvis နှင့်အတူထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်, Zuckerberg ဟာမှတ်ချက်ချသည်။
တိုင်အနားမှာညွှန်ပြအဖြစ်တစ်စုံတစ်ယောက်, အခြေစိုက်စခန်းထိမိသောမိသားစုကိုအကြံပေးနေချိန်တွင်အဆိုပါထုတ်ကုန်, ထိုဗိမာန်မှာဧည့်သည်သာမန်အခါဆုံးဖြတ်နှင့်အိမ်တွင်းသို့သူတို့ကိုငါရစေနိုင်ပါတယ်။
"ကျွန်မမျှော်လင့်ထားသည့်ထက် ပို. စိတ်ပျက်ခြင်းကြီးစွာသောစာချုပ်ခဲ့ကြောင်းတစ်ခုမှာထောင့်ရုံပေါင်းသင်းခြင်းနှင့်ငါ့အိမ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောမူဘောင်များအများစုနှင့်အတူစကားပြောခဲ့ပါသည်," Zuckerberg ဟာကပြောပါတယ်။
Associates မှဥပမာ, Jarvis ရုံအင်တာနက်သို့ချိတ်ဆက်ခံရဖို့နေအိမ်များအတွက်ပစ္စည်းတွေမလိုအပ်မယ်လို့ Facebook အခငျြးကိုလှူဒါန်းသူနှင့် CEO ဖြစ်သူအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်, သူတို့ပုံမှန်မော်ဒယ်များအပေါ်အပြေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပေသည်, ထိုအဘို့ဆွဲထုတ်ရေးသားနောက်ကျောကသူ့ထုတ်ကုန်မှလာသော အကျိုးတူ။
AI အသို့မိမိအကျူးကျော်ဒါ့အပြင် setting နားမလည်ဖို့ programming ကိုလှုံ့ဆော်၏အရေးပါမှု, ဥပမာ, အဘယ်သူပြောနေတာနဲ့တို့သည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
"ငါကအတွင်း AC အ (aerating နှင့်အအေး) ဖွင့်ကိုဖွင့်ဖို့ကိုသွန်သင်လိုက်တဲ့အခါ 'ငါ့ရုံးခန်း,' ကိလကအတိအကျတူညီသိကြပေးနိုင်ပါတယ်သည့်အခါအဖြစ်လုံးဝအတော်လေးတူညီမဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်း," Zuckerberg ဟာမိမိအပိုကောင်းတစ်ဝက်ကိုရည်ညွှန်းဟုပြောသည်။
တောင်းခံဂီတ AI အတစ်ကျိန်းဝပ်မွေးကင်းစကလေးတစ်ဦး variable ကိုဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, အရာအခန်းကပြောသည်ခံခြင်းမရှိဘဲကစားခံရဖို့လာသောအခါနှိုင်းယှဉ်ကိစ္စများပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
ပို setting AI အ, ပိုကောင်းက Open-ချောမြှူဆွယ်တောင်းခံနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်ထားပြီးသူမှတ်ချက်ချသည်။
"အခုဆိုရင်ကျွန်မအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရိုးရှင်းစွာ Jarvis အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းလက်သည်းအဘို့နှင့်ငါ့အတိတ်နားထောင်ဒီဇိုင်းများမှာ gander ယူပြီးအသုံးပြုပုံကြောင့် '' ငါ့ကိုအချို့ဂီတ play '' ငါစကားကိုနားထောငျဖို့လိုအပျချင်ပါတယ်တစ်ခုခုမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။
Zuckerberg ကသူသည်မိမိအ Jarvis သူ့ကိုန်းကျင်တစ်ဦးချင်းစီ exasperate ဖို့မယေဘုယျအားဖြင့်ပြုလုပ်ဖြေရှင်းမှဆန့်ကျင်အဖြစ်သူက Facebook ကို Messenger ကိုအကြိုးအတှကျအလုပျလုပျခဲ့တဲ့ "bot" ကိုအသုံးချဖို့ content လေ့ကဆိုသည်။
အဆိုပါ AI အသူ့ကိုစစ်မှန်သောတစ်ဦးချင်းအဖြစ်ကပိုကထည့်သွင်းစဉ်းစားအောင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ addressing သူမှတ်ချက်ချသည်။
"ငါသည် Jarvis နှင့်အတူအသံဖြင့်ထည့်သွင်းကျောအတိုင်းဝေး, ငါသည်ဒါ့အပြင်ပိုပြီးရယ်စရာအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါဘူး," Zuckerberg ဟာကပြောပါတယ်။
သူက AI အသူတို့ကသူတို့သည်ယား်၏နှင့် Jarvis မတရားဖမ်းဆီးပစ်မှတ်ထားဖို့ခွေးကလေးအပါအဝင်မိသားစုထဲမှာတစ်စုံတစ်ယောက်, ရွေးမေးဖို့ရာအတွက်လွှဲညွှန်ကြားချက်ကိုပြန်ပြောင်းပြောပြသည်။
Zuckerberg ဟာ Jarvis တိုးမြှင့်ထားရန်လိုခဲ့လျှင်, သူကပို AI အဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှစ်ပေါင်း 10 မှလာမယ့်ငါးဦးကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်ရန်မယ်လို့မကြာသေးခင်ကမှတ်ဉာဏ်အတွက်အခြားမည်သည့်အချိန်ထက်ဖျောင်းဖျခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
"ငါသည် Jarvis ငါ၏အကြီးစိမ်းလန်းဥထိန်းချုပ်ငါ့ကိုချက်ပြုတ်ကူညီရှိသည်ဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်, သေးသောကြောင့် T-ရှပ်အင်္ကျီသေနတ်တက်ဂီယာထက်သိသိသာသာပိုပြီးစစ်မှန်တဲ့ဟက်ကာယူပါလိမ့်မယ်" ဟုသူကမြေထည် cooker တစ်ထင်ရှားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုရည်ညွှန်းဟုပြောသည်။
" သာ. တိုးချဲ့အသုံးအနှုန်းမှာတော့ငါဘယ်လောက်အထူးသဖြင့်အမှုကိုမလုပ်ဆောင်ပါကဆုံးမဩဝါဒပေးမယ့်အစားငါ့သစ်ကိုစွမ်းရည်ကိုယ်နှိုက်ကသင်ယူဖို့ဘယ်လောက် Jarvis ဖေါ်ပြခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့အခွင့်အလမ်းထဲကတစ်ကန်ရချင်ပါတယ်။ "
AI အဥပမာ, gadgets နှင့်အတူစတင်, တစ်ဦးချင်းစီလက်ထောက်မှဆက်သွယ်မှုများကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များဖြေကြားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေထိန်းချုပ်ဖို့ရာအမေဇုံ: Echo နှင့် Google Home ကိုစပီကာတစ်ဦးချင်းစီ '' နေအိမ်များအတွက်ခြေကုပ်ရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
source: NDTV gadget သတင်းများ
ဒေလီတရားရုံးချုပ်: WhatsApp ကို Group မှပစ္စည်းဥစ္စာဘို့တာဝန်ရှိမဟုတ်စီမံအုပ်ချုပ်